सवा २ अर्बको ‘आर्थिक अपराध’मा प्रभु बैंकलाई राष्ट्र बैंकले ‘क्लिन चिट’ दिएको खुलाशा ! | Diyopost
सवा २ अर्बको ‘आर्थिक अपराध’मा प्रभु बैंकलाई राष्ट्र बैंकले ‘क्लिन चिट’ दिएको खुलाशा !
काठमाडौं, १५ वैशाख । अर्बौंको आर्थिक अपराधमा मुछिएको एक प्रतिष्ठित बैंकलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही नै नगरी उन्मुक्ति दिएको पाइएको छ ।
राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार उच्च तहको मिलेमतो र निर्देशनमा प्रभु बैंकले गरेको आर्थिक अपराधमा उन्मुक्ति दिएको पाइएको हो । प्रभु बैंकका तत्कालिन अध्यक्ष देवि भट्टचन र सिइओ अशोक शेरचनमाथिको राष्ट्र बैंकले छानबीन गरेको थियो । छानबीनका क्रममा भट्टचन र शेरचनको मिलेमतोमा २ अर्बभन्दा बढी विदेशी मुद्रा अपचलन गरि हुण्डीको अवैध कारोबार गरेको खुलेको थियो । तर, यस्तो गंभिर अपराधमा राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकका अध्यक्ष भट्टचन र सिइओ शेरचनलाई ‘क्लिन चिट दिएको’ पाइएको हो ।
गत माघ अन्तिममा राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकका पूर्वअध्यक्ष भट्टचन र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ अशोक शेरचनलाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो । दुवै जनाले राष्ट्र बैंकलाई दिएको स्पष्टिकरण चित्त नबुझेपछि पुन स्पष्टिकरण पत्र थमाएको थियो । तर, एकाएक माथिल्लो तहको मिलेमतो र दबावमा क्लिन चिट नै दिएको घटना सार्वजनिक भएको छ ।
प्रभु रेमिटको नाममा विदेशमा संकलित रकम हुण्डिको रुपमा प्रयोग गरेको र यता बैंकबाट आफ्नै सहायक कम्पनिलाई ऋण प्रवाह गरि यतैबाट सल्टाएको आरोपमा राष्ट्र बैंकले छानबीन थालेको थियो । सवा २ अर्बभन्दा बढी रकम हुण्डीको रुपमा प्रयोग गरेको खुलाशा भएको थियो ।
सोही प्रकरणमा रेमिटलाई भने राष्ट्र बैंकले ५० हजार जरिवाना र सवा २ अर्बको १० प्रतिशतले हुन आउने ब्याज अशुल्ने निर्णय गरेको थियो । गत माघ २३ गते बसेको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले प्रभु बैंकका सिइओ शेरचन र तत्कालिन अध्यक्ष भट्टचनलाई ‘तपाईंलाई कारबाही किन नगर्ने ?’ भन्दै स्पष्टिकरण पत्र पठाएको थियो ।
वित्तिय संस्था ऐन अनुसार आफै सञ्चालक र समलग्न भएको अर्को कम्पनीलाई कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था छ ।
कानुनी व्यवस्था विपरित प्रभु मनि ट्रान्सफरले प्रभु बैंकबाट अर्बौं ऋण लिएको भेटिएको थियो ।
राष्ट्र बैंकले छानबिन गर्न थालेपछि अध्यक्ष देवि भट्टचन प्रभु बैंकको अध्यक्षबाट बाहिरिएका थिए । गत पुस अन्तिम साता (२७ गते) सम्पन्न बैंकको वार्षिक साधारणसभाबाट उनी अध्यक्षबाट बाहिरिएका हुन् । साधारणसभामा सञ्चालक समितिमा उनले उम्मेदवारी नै दिएका थिएनन् ।
आर्थिक अपराधमा फस्ने भएपछि शेरचनको योजनामा राष्ट्र बैंकमा समेत लामो समय काम गरेका लिला प्रकाश सिटौलालाई सञ्चालक समितिमा नियुक्त गरिएको थियो । संचालक समितिमा आएको केही दिनमै उनलाई रहस्यमयी रुपमा सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको हो ।
‘राष्ट्र बैंकसँग सेटिङ मिलाउनकै लागि लिला प्रकाश सिटौलालाई अध्यक्ष नियुक्त गरिएको हो,’ उच्च स्रोत भन्छ,‘तर, विषय सिटौलाजी प्रभु बैंकको सञ्चालक नियुक्त हुनुअघि नै मिल्दै थियो ।’
प्रभु बैंकका सिइओ शेरचन ‘आफूहरुले राष्ट्र बैंकबाट क्लिन चिट पाएको’ खुलमखुल्ला बताउँदै आएका छन् । उनी आफूलाई भेट्नेहरुसँग पूर्वअध्यक्ष भट्टचन र आफूमाथिको कारबाही रोकिएर क्लिन चिट पाएको बताउँदै आएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले तत्कालिन प्रभु बैंकका अध्यक्ष देवि भट्टचनलाई ‘अध्यक्षमा बहाल नभएकै कारण’ ऋण अपचलन जस्तो गम्भिर आर्थिक अपराधमा उन्मुक्ति दिएको स्रोत बताउँछ ।
प्रभु समूहअन्तर्गत प्रभु बैंक, प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स, प्रभु इन्स्योरेन्स, प्रभु क्यापिटल, प्रभु पे, प्रभु हेलिकप्टर, प्रभु मनी ट्रान्सफर, प्रभु टेलिभिजनलगायत कम्पनी सञ्चालनमा छन् । यीनै सहायक कम्पनिको नाममा मनोमानी ऋण अपचलन भएको स्रोतले जनाएको छ । यी सबै कम्पनिको नेतृत्व गर्ने प्रभु समुहका अध्यक्ष भने देवि भट्टचन नै हुन् ।
उच्च स्रोतका अनुसार बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ शेरचनले राष्ट्र बैंकमाथि राष्ट्रपति कार्यालयबाट दबाव दिएका थिए । राष्ट्र बैंकमाथि राष्ट्रपति कार्यालयकै दबाव आएपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि निरिह बनेको स्रोत बताउँछ ।